သတင်း - 2020 ခုနှစ် တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာ - စျေးကွက်အခြေအနေစစ်တမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း။
2020 ခုနှစ် တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာ - စျေးကွက်အခြေအနေစစ်တမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း။
2020 ခုနှစ်မှစ၍ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် တည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ထိခိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံ၏ အလုပ်နှင့် ထုတ်လုပ်ရေးများ လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်စတင်လာသည်နှင့်အမျှ ယောဂအဝတ်အထည် လုပ်ငန်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပါသည်။ ရေရှည်တွင်၊ ကပ်ရောဂါသည် ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကြီးတွင် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကောင်းမွန်နေပြီး နေထိုင်သူများ၏ ၀င်ငွေအဆင့်သည် အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေပြီး ယောဂအဝတ်အထည် လုပ်ငန်းအတွက် စျေးကွက် စားသုံးမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ စက်မှုမူဝါဒသည် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကောင်းမွန်သောမူဝါဒအာမခံချက်ကိုလည်း ပေးပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ ပြည်တွင်းယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမြင်အရ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းကို မြို့တော်က မျက်နှာသာပေးခဲ့သည်။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ 2019 ခုနှစ်တွင် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည် ယွမ်သန်း 100 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်ကောင်းရှိကြောင်း ပြသနိုင်သည်။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
အရည်အသွေးပြည့်မီသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သို့ ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော စက်မှုလုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည်ဖြင့် အဓိကအသုံးပြုကာ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကို ရေတိုတွင် စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု ပိုမိုရရှိရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြင့်လာမည်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကြောင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစကေးကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်မည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်မှုသည် တည်ငြိမ်သောတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
2020 မှ 2026 ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်မှု ခန့်မှန်းချက်
စက်မှုဈေးကွက် အာရုံစူးစိုက်မှု အညွှန်းကိန်းသည် အသုံးအများဆုံး တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ American ဘောဂဗေဒပညာရှင် Bain နှင့် Japanese MitI တို့၏ စက်မှုအာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့် အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုစံနှုန်းအရ စက်မှုစျေးကွက်တည်ဆောက်ပုံအား အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲထားသည်- oligopolistic အမျိုးအစား (CR8≥40) နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးအစား (CR8 <40%)။ ၎င်းတို့တွင် oligopoly အမျိုးအစားကို အလွန်မြင့်မားသော oligopoly အမျိုးအစား (CR8≥70%) နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော oligopoly အမျိုးအစား (40%≤CR8 < 70%) ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးအစားကို အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးအစား (20%≤CR8 < 40%) နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးအစား (CR8 < 20%) ဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားထားသည်။
2019 ခုနှစ်တွင် ယောဂအဝတ်အစားစျေးကွက်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ရှုထောင့်မှ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ CR4 သည် **% ဖြစ်သည်။
American Bain & Company မှ စျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
China Report network သည် အကြီးတန်းစက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အစီရင်ခံစာ၊ စျေးကွက်အတွင်းကျကျ သုတေသနအစီရင်ခံစာပံ့ပိုးပေးသူနှင့် ကမ္ဘာအုပ်စု၏ ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ပေါ်တယ်ဖြစ်သည်။ "2020 China Yoga Clothing Market Analysis Report - Market Status Survey and Development Strategy Planning" သည် နောက်ဆုံးထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဒေတာ၊ စျေးကွက်အပူအိုက်ဆုံးများ၊ မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော ထောက်လှမ်းရေး၊ စျေးကွက်အလားအလာ ခန့်မှန်းချက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗျူဟာနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၊ စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းလမ်းကြောင်း၊ လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်မဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ၏ မှန်ကန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကူညီရန် အလိုလိုသိမြင်နိုင်သောဇယားအများအပြားဖြင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုမှ ထုတ်ပြန်သော တရားဝင်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်သတင်းအချက်အလတ်ဌာန၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းသုတေသနပြုကာ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဤအစီရင်ခံစာတွင် စျေးကွက်သုတေသနနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သီအိုရီမှ လက်တွေ့အထိ၊ macro မှ micro အပါအဝင် ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ
စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရဌာနများအတွက် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို တိကျစွာဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပြိုင်ဆိုင်မှုပုံစံကို နားလည်ရန်၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် မှန်ကန်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် နားလည်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသန၏အမြင်သည်ပြည်တွင်းတွင်လူသိများသောစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက်အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း၊ အကြီးတန်းကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စက်မှုအသင်းအဖွဲ့များ၊ တစ်ဦးချင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာ၊ ဖောက်သည်ကာဗာများကဲ့သို့သော huawei၊ China petroleum၊ China telecom၊ China building နှင့် HP, Disney, ကဲ့သို့သော စက်မှုထိပ်တန်း လုပ်ငန်းများနှင့် ဖောက်သည်များက တွင်ကျယ်စွာ အသိအမှတ်ပြုခံရပါသည်။
ဤသုတေသနအစီရင်ခံစာ၏အချက်အလက်များကို နိုင်ငံတော်စာရင်းအင်းအချက်အလက်၊ အကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ မေးခွန်းလွှာစစ်တမ်းအချက်အလက်၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များနှင့် အခြားဒေတာဘေ့စ်များကို အဓိကအသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းတို့အနက် မက်ခရိုစီးပွားရေးဒေတာသည် အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုမှဖြစ်ပြီး အချို့သောစက်မှုစာရင်းအင်းအချက်အလက်များမှာ အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသားစာရင်းအင်းဗျူရိုနှင့် စျေးကွက်သုတေသနဒေတာမှ လာကြောင်း၊ လုပ်ငန်းဒေတာများသည် အဓိကအားဖြင့် နိုင်ငံတော်၏အကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စတော့အိတ်ချိန်းများ၏ စာရင်းအင်းဒေတာဘေ့စ်မှ လာခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းအင်းဗျူရို၊ နှင့် ဈေးနှုန်းဒေတာသည် အဓိကအားဖြင့် စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ရေးဒေတာဘေ့စ်အမျိုးမျိုးမှ လာပါသည်။ ဤသုတေသနအစီရင်ခံစာတွင် ချမှတ်ထားသော စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများတွင် Porter ၏ Forces မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ငါးခု၊ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် PEST ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအခြေအနေ၏ လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း၊ အကြီးတန်းလေ့လာသုံးသပ်သူများမှတဆင့် လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်း၏ hot spots များ။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးတည်ချက်၊ ပေါ်ပေါက်လာသော ပူနွေးသောနေရာများ၊ စျေးကွက်နေရာ၊ နည်းပညာလမ်းကြောင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဗျူဟာတို့ကို ခန့်မှန်းပါ။
အခန်း ၁- 2017 မှ 2020 ခုနှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ပထမအပိုင်းသည် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
နှစ်ခု၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း အခြေခံအချက်အလက်မိတ်ဆက်
3. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကို လေ့လာခြင်း။
ဒုတိယအပိုင်းသည် တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အထက်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။
3. တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စက်မှုကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်မှုများကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်း ၃- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဘဝသံသရာ ဆန်းစစ်ခြင်း။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဘဝသံသရာသီအိုရီ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဒုတိယ၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဘဝသံသရာ ဆန်းစစ်ချက်
စတုတ္ထအပိုင်း ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အကျိုးအမြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
နှစ်ခု၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း စီးပွားရေးလည်ပတ်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အပိုင်း 5- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဝင်ခွင့်အတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးအတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း။
နှစ်ခု၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
iii. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် စွမ်းရည်အတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း။
ကြင်ယာ၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် အမှတ်တံဆိပ်အတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း။
V. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် အခြားသော အတားအဆီးများကို လေ့လာခြင်း။
အခန်းနှစ်- 2017-2020 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယောဂအဝတ်အထည် စျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ပထမပိုင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒေသတွင်းဖြန့်ချီရေးဈေးကွက်ဖြစ်သည်။
တတိယအပိုင်းမှာ အာရှယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒေသတွင်းဈေးကွက်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
I. အာရှယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာခြင်း။
ii. အာရှယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အရွယ်အစားနှင့် စျေးကွက်ဝယ်လိုအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တတိယအချက်၊ အာရှယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အလားအလာ ဆန်းစစ်ချက်
အပိုင်းလေး- မြောက်အမေရိက ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒေသဆိုင်ရာ စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
1. မြောက်အမေရိက ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာခြင်း။
ii. မြောက်အမေရိက ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အရွယ်အစားနှင့် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကို လေ့လာခြင်း။
3. မြောက်အမေရိကယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အလားအလာကို လေ့လာခြင်း။
ကဏ္ဍ v စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု eu ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း
1. eu ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာခြင်း။
ii. ဥရောပရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အရွယ်အစားနှင့် စျေးကွက်ဝယ်လိုအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
3. Eu ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အလားအလာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အပိုင်းခြောက်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် အဓိကလုပ်ငန်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။
အပိုင်း7ဖြန့်ဝေမှု လမ်းကြောင်းသစ် ခန့်မှန်းချက် 2021 မှ 2026 ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း
2021 မှ 2026 ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယောဂဝတ်လုပ်ငန်း စျေးကွက်အရွယ်အစား၏ အပိုင်း 8 ခန့်မှန်းချက်
တတိယအခန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာထားသည်။
အပိုင်း ၁ သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မက်ခရိုစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
I. တရုတ်နိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်မှုကို လေ့လာခြင်း။
ဒုတိယအချက်မှာ စက်မှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူမှုရေး ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လေ့လာခြင်း။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးက သုံးစွဲတဲ့ ယောဂအဝတ်အစား စုစုပေါင်းပမာဏ
5. မြို့ပြနှင့်ကျေးလက်နေသူများ၏ ၀င်ငွေတိုးတက်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း။
စားသုံးသူစျေးနှုန်း အပြောင်းအလဲများကို လေ့လာခြင်း။
နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေအနေများကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်းနှစ်- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း။
I. လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်း စည်းကမ်းစနစ်၏ အခြေအနေ
စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အဓိကမူဝါဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများ
အပိုင်း ၃- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း။
1. လူဦးရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း။
2. ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း။
ကြင်ယာ၊ ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်
ပဉ္စမအချက်၊ စားသုံးမှု အယူအဆ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အခန်း ၄- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှု
ပထမအပိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမိတ်ဆက်ဖြစ်သည်။
I. စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
ဒုတိယအချက်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
သုံးခု၊ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လက္ခဏာများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဒုတိယအပိုင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အရွယ်အစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ တတိယအပိုင်းကို ထောက်ပံ့မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စတုတ္ထအပိုင်းသည် ဝယ်လိုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
အပိုင်း 5- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကြား ချိန်ခွင်လျှာကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်းခြောက်- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပဉ္စမအခန်းတွင် စစ်ဆင်ရေးဒေတာကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အရွယ်အစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ ပထမအပိုင်း
မြတ်စွာဘုရားက လုပ်ငန်းပမာဏကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒုတိယအပိုင်းကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဒုတိယ၊ အရောင်းရငွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၃၊ တာဝန်ယူမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ကြင်ယာ၊ အမြတ်ပမာဏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ တတိယအပိုင်းသည် ငွေကြေးအညွှန်းကိန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်
ဒုတိယအချက်မှာ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
3. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်ကို လေ့လာခြင်း။
ကြင်ယာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစွမ်းရည်ကို လေ့လာခြင်း။
အခန်းခြောက်- 2017-2020 တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်ပုံစံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ပြိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေ ဆန်းစစ်ခြင်း၏ ပထမအပိုင်း
I. တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို လေ့လာခြင်း။
2. တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်းနှစ်- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
1. တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်စုစည်းမှုကို လေ့လာခြင်း။
2. တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းအာရုံစူးစိုက်မှုဒီဂရီကို လေ့လာခြင်း။
တတိယအပိုင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပြဿနာများဖြစ်သည်။
စတုတ္ထအပိုင်းသည် ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဗျူဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပဉ္စမကဏ္ဍတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း။
3. ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
ကြင်ယာ၊ လုပ်ငန်းဗျူဟာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု
အခန်း ခုနစ်- 2017-2020 တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်ချက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တက်ကြွသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပထမပိုင်းသည် စားသုံးသူစျေးကွက် လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။
ဒုတိယအပိုင်းသည် တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။
1. လိုအပ်ချက် ဦးစားပေး
ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တတိယအပိုင်း
စတုတ္ထအချက်၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဈေးနှုန်းအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော အကြောင်းရင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပဉ္စမအပိုင်း
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ခြောက်ခုမြောက်ကဏ္ဍတွင် ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ် ခန့်မှန်းချက်
I. တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးနှုန်းလွှမ်းမိုးမှု အကြောင်းရင်းများ
အခန်း ၈- ၂၀၁၇-၂၀၂၀ တွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒေသတွင်း စျေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာခြင်း
ပထမအပိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒေသတွင်းစျေးကွက်အရွယ်အစားကို ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။
I. အရှေ့တရုတ်၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
2. အရှေ့တရုတ်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း။
3. အရှေ့တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်အရွယ်အစားကို လေ့လာခြင်း။
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပိုင်း ၃
I. အလယ်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
2. တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း။
3. တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်အရွယ်အစားကို လေ့လာခြင်း။
စတုတ္ထ၊ တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ယောဂအဝတ်အထည်များ၏ စျေးကွက်အရွယ်အစား ခန့်မှန်းချက်
အပိုင်း4တောင်တရုတ်၏စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
I. တောင်တရုတ်၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
2. တောင်တရုတ်ပြည်ရှိ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း။
3. တောင်တရုတ်ပြည်ရှိ ယောဂအဝတ်အထည်စျေးကွက်အရွယ်အစားကို လေ့လာခြင်း။
2017 မှ 2020 ခုနှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုအခြေအနေ အခန်း ၉
အပိုင်း 1 ပြိုင်ဆိုင်မှုတည်ဆောက်ပုံ လေ့လာခြင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း (ပေါ်တာငါးဦး၏ မော်ဒယ်)
အလားအလာရှိသော ဝင်ခွင့်များကို လေ့လာခြင်း။
iii. အစားထိုးပစ္စည်းများကို ခြိမ်းခြောက်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ကြင်ယာ၊ ပေးသွင်းသူများ၏ အလျှော့အတင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်
အပိုင်းနှစ်- တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ SWOT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
2. လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်း3တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း (PEST) ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း
အခန်း 10 ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ဒေတာမွမ်းမံမှုဖြင့် ချိန်ညှိထားသည်)
အပိုင်း ၁ ကထာ
4. အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို လေ့လာခြင်း။
အပိုင်း2စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အပိုင်း ၃ လုပ်ငန်းများ
အပိုင်း4စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အပိုင်း5စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
အခန်း 11 2021 မှ 2026 ခုနှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလားအလာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ခန့်မှန်းခြင်း
ပထမအပိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလားအလာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခြင်း။
2. တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အခွင့်အလမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
သုံးခု၊ တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်မှုခန့်မှန်းချက်
ဒုတိယအပိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ တတိယအပိုင်းသည် စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
I. တရုတ်နိုင်ငံရှိ Yoga အဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အရွယ်အစား ခန့်မှန်းချက်
သုံးခု၊ တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အထွက်တန်ဖိုး ခန့်မှန်းချက်
လေးခု၊ တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် အထွက်တန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
V. တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား ခန့်မှန်းချက်
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စတုတ္ထအပိုင်းသည် အမြတ်လမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ၊ တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ တိုးတက်မှုကို ခန့်မှန်းသည်။
နှစ်ခု၊ တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းသည် စုစုပေါင်းအမြတ်အစွန်း တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
2021 မှ 2026 ခုနှစ်အထိ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်နှင့် စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အခန်း 12
ပထမအပိုင်းသည် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စွန့်စားရမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ မူဝါဒအန္တရာယ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
သုံးခု၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ပြိုင်ဆိုင်မှုအန္တရာယ် ဆန်းစစ်ခြင်း။
ကြင်ယာ၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အခြားအန္တရာယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ဒုတိယကဏ္ဍတွင် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆန်းစစ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးမော်ဒယ်
သုံး၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဦးတည်ချက်
တတိယအပိုင်းမှာ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။
ဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန်
ii. အပြိုင်အဆိုင် မဟာဗျူဟာမြောက် မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
အခန်း 13:2021-2026 တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာနှင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း အကြံပြုချက်များ
ပထမအပိုင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အမှတ်တံဆိပ်ဗျူဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သည်။
၂၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းများသည် အမှတ်တံဆိပ်ဗျူဟာ၏ အရေးပါမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်
သုံးခု၊ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် အဆင့်အတန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ဒုတိယကဏ္ဍသည် ဈေးကွက်အဓိကဖောက်သည်ဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမအချက်မှာ အဓိကဖောက်သည်ဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ii. အဓိကဖောက်သည်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ထူထောင်ပါ။
တတိယအချက်မှာ အဓိကဖောက်သည်များအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာ
စတုတ္ထအချက်မှာ အဓိကဖောက်သည်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကောင်းစေသည်။
ငါး၊ အဓိက ဖောက်သည် မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အာရုံစိုက်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တတိယအပိုင်းသည် ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
ကြင်ယာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်း။
Vii အပြိုင်အဆိုင် ဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း။
အခန်း 14:2021-2026 တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပြုချက်များ
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ ပထမအပိုင်းသည် ထုတ်ကုန်ဗျူဟာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
အပိုင်းနှစ်- တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
တရုတ်ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ တတိယအပိုင်းသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းဗျူဟာဖြစ်သည်။
I. ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ချန်နယ်ရွေးချယ်ရေးဗျူဟာ
ပဉ္စမအပိုင်းသည် ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာသူ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည်။
I. တရုတ်နိုင်ငံရှိ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း၏ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများကို လေ့လာခြင်း။
တရုတ်နိုင်ငံ ယောဂအဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များကို လေ့လာခြင်း။
စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ- ၀၇-၂၀၂၁
မီးခိုးရောင် ယောဂဘောင်းဘီ ဝတ်စုံ, အနက်ရောင် ဘောင်းဘီတို, ပူပြင်းသော ယောဂဘောင်းဘီ ဝတ်စုံများ, Biker Shorts အမျိုးသမီး, အမျိုးသားဝတ် အင်္ကျီ, အားကစားဝတ်စုံ အမျိုးသား,